एमसीसी मुद्दा : हालकाे गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बन्न सक्ने -
एमसीसी मुद्दा : हालकाे गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बन्न सक्ने
२०७८, २४ भाद्र बिहीबार १२:३२
काठमाडौं, २४ भाद्र । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को मुद्दाले राजनीति गर्माएको छ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमासुमारलगायतको टोली नेपाल आउनु अघि नै यसको पक्ष या विपक्षमा अभिव्यक्तिहरु आइरहेका थिए ।
एमसीसीबारे अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारले उठाएका कतिपय विषयबारे जवाफ पठाइसकेको छ । एमसीसी संशोधन नहुने आशयसहितको जवाफपछि माओवादीले पारितको विपक्षमा धारणा बाहिर ल्याएको छ । यसअघि नै अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी पारित नहुनेमा ढुक्क हुन भनेका थिए ।
एमसीसीको मुद्दाले राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमसीसी पारित गर्न हतारिएका छन् । उनले एमसीसी पारित गर्नुलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी सम्झौता भएको थियो ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीबारे नहतारिने बताइसकेका छन् । उनी विगतमा एमसीसीको पक्षमा थिए । तर, बोलीमा केही बदलाव आइसकेको छ । तर, ओलीले यसलाई राजनीतिक अस्त्र बनाएका छन् ।
एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनभित्र फरक धारणा बाहिर आएकाले कम्पन आएको छ । गठबन्धन नै भत्कनसक्ने देखिएको छ । गठबन्धन भत्किएमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना पनि छ । देउवा र ओलीबीच पछिल्लो समय संवाद चल्न थालेको छ । यो नयाँ गठबन्धनको संकेत पनि हो ।
काँग्रेस, एमाले र एमसीसी पक्षधर मधेशवादी दल मिलेमा पारित हुने सम्भावना छ । एमसीसीको मुद्दाले मुलुकलाई त्यही दिशातर्फ लाने अवस्था बन्दैछ । प्रचण्डले यही संकेत पाएर सत्ता गठबन्धन भत्काउन खोजेको विषय उठाएका छन् ।
Previous articleएमसीसीको जवाफ– कुनै सैन्य रणनीति होइन
Next articleएमसीसी उपाध्यक्षको टोली काठमाडौंमा
धार्मिक सहिष्णुताको सन्देश दिँदै बुधबारे जेसीजद्वारा कार्यक्रम सुभारम्भ
अध्यक्षमा बागी उठेका रिजाललाई पार्टीबाट निष्कासन
बरपीपल सहकारीको अध्यक्षमा कार्की
© epurbeli | Designed by OTPS
Hey Buddy!, I found this information for you: "एमसीसी मुद्दा : हालकाे गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बन्न सक्ने". Here is the website link: https://epurbeli.com/archives/3776. Thank you
नीति तथा कार्यक्रम जेठ २ गते अपरान्ह ४ बजे पेश हुने
Top Post २०७८, २४ भाद्र बिहीबार १२:३२